Otu Nwata, Nna abụọ - Ụmụ nwoke hụrụ n'anya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Otu nwa, nna abụọ
Otu nwa, nna abụọ nkezi 5 / 5 si 2
NA / A, o nwere ihe nlere 13.7K
Manhwa, Weebụ, Akwụkwọ ntanetị, Yaoi
Otu nne na nna nwere nna abụọ! Nna na-eme ebere Sungsil chọpụtara na nwunye ya bụ onye omekome na nwa ha nwoke abụghị nke ya! Ezigbo nna, onye na-eme ihe nkiri Seungheon Kang, na-anara nwa ya mana n'oge na-adịghị anya ọ ghọtara na ya enweghị ike ịnagide ịkwa ákwá mgbe niile. Ndị ikom abụọ a nwere ike ịchọta ụzọ ha ga-esi rụọ ọrụ ọnụ na ịzụlite obere Hyunwoo?
Monhụnanya anụ anụ (Mio Junta)
Webtoon ime ụlọ ọcha Manhwa Hentai